Top 20 Android Games maka Kids na 2015 ga-eme ka Ha Smile
Ibu Ibu gị android smart ekwentị na nke kacha mma egwuregwu n'ihi na gị ụmụaka. A bụ ndepụta nke top 20 android egwuregwu na gị nwa ewu ga-maa-enwe:
1. Mkpụrụ Ninja
Ọ bụrụ na gị na nwa ewu ama alụ agha ma na-ebekasị, mgbe ahụ, Mkpụrụ Ninja bụ otu nke kasị mma android egwuregwu n'ihi na nwa gị. A edinam juru n'ọnụ egwuregwu nwere magburu onwe ndịna-emeputa na nsonaazụ ụda nke na-agbakwụnye-ise kpakpando.
2. Na Animal Piano
Adịgide adịgide gburugburu a akụkọ akara, nke a bụ otu n'ime ihe ndị kasị ọchị-jupụta egwuregwu ị nwere ike ibudata maka gị nwa ewu. Egwuregwu bụ ukwuu adabara ụmụaka n'etiti afọ otu nke 8-12.
3. Taco Hair Ụlọ Mmanya 2
Site n'ịṅa obere ego nke $2.99, ị nwere ike mfe ibudata egwuregwu a si android play ụlọ ahịa. Egwuregwu na-enye ohere gị nwa ewu na-agba ọsọ ha onwe ha ntutu Ụlọ Mmanya ebe ha nwere ike ebipụ ma ọ bụ ịke ma ọ bụ agba agiri-isi nke dị iche iche odide. Dị iche iche ntutu ngwa ndị dịnụ na Ụlọ Mmanya na ike ga-eji maka styling.
4. Taco Truck Saa
Kwa eyen hụrụ ụgbọala na nke a bụ ihe mere ha ga-n'anya egwuregwu a dị ka mma. Egwuregwu na-enye ohere gị nwa ewu ịgba ọsọ ụgbọala ya na nke a osisi mebere ụwa.
5. The Snowman na Snow nkịta
Ahịa: $ 1.5
Snowman abụwo mgbe nile na-akpali akpali fantasy nke ọ bụla eyen. Egwuregwu a kwụnyeere kpokọtara ụwa jupụtara snow. Egwuregwu nwere ike mfe arụnyere na gị android smart ekwentị na-enweghị na-akwụ ụgwọ otu penny.
6. Magic Belles
Ọ bụrụ na gị na nwa ewu bụ n'etiti afọ otu nke 3 na 6, mgbe ahụ, egwuregwu a bụ nke zuru okè oke maka gị! Egwuregwu bụ a obibi na omimi fairies na elves nke bụ ụfọdụ n'ime mmasị odide nke a eyen.
N'anya minions? Ọ bụrụ na gị na nwa ewu hụrụ minions, mgbe ahụ, Despicable Me bụ kacha egwuregwu na gị nwa ewu ga-maa hụrụ n'anya! Gị nwa ewu ga-akpọ ọrụ nke Minion ke egwuregwu.
Ụmụaka n'anya sketching na ị ga-maa n'anya iji gbaa nwa gị si creativity. Osise-A-Song bụ ukwuu mmekọrịta na ihe egwuregwu maka ụmụaka.
9. Ịtụnanya Alex
Ọ bụrụ na ị chọrọ ka nwa gị na-amụ ihe ọbụna mgbe na-egwu egwuregwu, mgbe ahụ, Ịtụnanya Alex bụ nhọrọ ziri ezi! The egwuregwu dabeere Physics egwuregwu mgbagwoju anya nke ga-akụziri gị nwa ewu ihe ọhụrụ ọbụna na-egwu egwu.
10. Cut eriri
Nke a bụ egwuregwu nnọọ mfe egwu. E nwere ọtụtụ etoju ma na na onye ọ bụla larịị, na nwa ewu nwere na-ịcha eriri iji na-eri nri ogologo anu.
11.-eku ume, Chee echiche, na-eme na Sesame
Ihe mgbaru ọsọ nke egwuregwu a bụ aka na edozi nsogbu ikike nke umu e
12. Olee ebe bụ My Mmiri?
Ma ọzọ a edozi nsogbu egwuregwu na-akụziri gị nwa ewu ihe bara uru, "Olee ebe bụ My Mmiri" bụ a witty na nkọ egwuregwu na kediegwu ndịna.
Egwuregwu kwụnyeere a dị mfe ibé enyere gị ọkụkọ ịgafe okporo ụzọ. E nwere dị iche ụmụ anụmanụ na ndapụta ịhọrọ site na.
14. dragọn Quest V
Ahịa: $ 12
Ọ bụrụ na gị na nwa ewu ama mmasị ndị gara aga nsụgharị nke egwuregwu a, mgbe ahụ ọ ga-enwe obi ụtọ na-egwu nke-ise akụkụ nke egwuregwu a usoro.
Ahịa: $ 3.5
Mee elu na galaxy ụwa, Galaxy Trucker bụ kacha rụsiri egwuregwu n'ihi na gị nwa ewu na ọ ga-maa hụrụ n'anya!
Ahịa: $ 3
Gunbrick bụ a mgbaghoju anya egwuregwu na enhances echiche ikike nke gị nwa ewu.
17 Gunslugs 2
Ahịa: $ 2.5
Gunslugs 2 bụ kacha rụsiri egwuregwu usoro ezigbo maka ụmụaka.
18. Heroes nke ike na Magic III HD
Ahịa: $ 10
Mee elu na akụkọ ihe mere eme ụfọdụ, Heroes nke ike na Magic bụ atụmatụ dabeere egwuregwu nke dị maka $ 10 na play ụlọ ahịa.
19. iberibe bot Ọ
Ahịa: $ 2
Iberibe bụ aha nke robot nke bụ isi agwa nke egwuregwu. Ị kwesịrị ị na-enyere a robot ke ọbọ ya ihe mgbaru ọsọ.
20. Adventure Time Game Ọkachamara
Dabere na doodle echiche, Adventure Time Game Ọkachamara bụ nke zuru okè sketching egwuregwu n'ihi na gị nwa ewu.
Top 10 Game ndekọ software 2015 n'ihi na pc
Top 5 free Game ndekọ software 2015 n'ihi na windowmac
> Resource> Game> Top 20 Android Games maka Kids na 2015 ga-eme ka Ha Smile